About Us - Security Service in Myanmar: Aspect Management Security
Security Items Provided
GREETINGS FROM ASPECT MANAGEMENT SECURITY (MYANMAR) CO. LTD.
*** Greetings from Aspect Management Security (Myanmar) Co. Ltd.***
Brief background history of the Company –
Aspect Management Security (Myanmar) Co. Ltd. was established in 2009.
The training program consists of essential elementary security providing methods, the teaching of basic rules/regulations, courses on providing first aid, basic fire fighting skills, traffic control techniques and rules, self defense courses, handling of CCTV and the use of other security devices, use of metal detectors, skills in conversing and dealing with people, etc. Only after having fully acquired all the foregoing skills are they appointed as Security Guards. These Security Guards are provided to various businesses, companies, factories, embassies, homes, hospitals, clinics, hotels, strategic buildings, trade fairs, mass meetings/gatherings, parties, etc., for undertaking efficient security services.
More than 10 years have passed since the establishment of this company in Myanmar. In addition to the experienced people who provided the training to our staff we have improvised and added to the training skills required for the special needs in Myanmar and solving difficulties and problems peculiar to our country and asaresult our staff have become much more efficient in the discharge of their duties. Thus our company has gained the reputation ofacompany to be trusted.
In accordance with our motto “Consult with Aspect to prevent/minimize danger of loss tomorrow” we are striving utmost to provide efficient security services in all matters so that our customers can enjoy peace of mind always. We believe “Customer Satisfaction” is the landmark of our success and we are therefore always prepared to strive utmost to fulfill the security needs of customers.
Our experienced Security Personnel will, if required, make personal visits to any and all party/parties interested in discussing about/obtaining our security services and are welcome to call our 24-hour available phone services – 01-541758.
Alternatively our Admin Assistant, Daw May Thu Hlaing, can be contacted on 01 541758 or enquiries can be sent by emails to – [email protected] – [email protected]
Consult with Aspect to prevent/minimize danger of loss tomorrow
Aspect Management Security (Myanmar) Co., Ltd. မှ ဂါရ၀တရားဖြင့် လှိုက်လှဲစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Aspect Management Security (Myanmar) Co., Ltd. သည် လူကြီးမင်းတို့၏ အသက်၊အိုးအိမ်၊စည်းစိမ်များ ဆုံးရှုံးမှု့ အန္တရာယ် လျော့ပါးစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အချင်းပြည့်မီသော လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနှိုင်ရန် မိတ်ဆက်တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤမိတ်ဆက်စာတွင် Aspect Management Security (Myanmar) Co., Ltd. ၏ ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်း ၀န်ဆောင်မှု့ပေးမည့် အစီအစဉ်များ၊နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လုံခြုံရေးပညာ သင်တန်းအကြောင်းနှင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသော အခြေအနေများအား အကျဉ်းအားဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။
Aspect Management Security (Myanmar) Co.,Ltd မှ ၀ါရင့်လုံခြုံရေးပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Aspect Management Security (Myanmar) Co., Ltd အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါသည်။
၄င်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ပါဝင်သော အခြေခံလုံခြုံရေးပညာများ၊ ဥပဒေပညာများ၊ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများ၊ အခြေခံမီးသတ်ပညာများ၊ ယဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းဥပဒေများ၊ ကိုယ်ခံပညာများ၊ CCTV ကင်မရာနှင့်အခြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိရိယာကိုင်တွယ်အသုံးပြုနည်းများ၊ သတ္ထု ရှာဖွေနည်းများ၊ လူမှု့ဆက်ဆံရေးနည်းလမ်းများ စသည့်ပညာရပ်များကို ပြည့်စုံစွာ သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးသော ၀န်ထမ်းများအား မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ၊ သံရုံးများ၊ လူနေအိမ်များ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ၊ ဟိုတယ်များနှင့် အခြားအရေးကြီး အဆောက်အဦးများ၊ ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ အစည်းအဝေးပွဲများ၊ ပါတီပွဲများတွင် လုံခြုံမှု့အပြည့်အ၀ပေးနှိုင်ရန် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးနှိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းအပြင် BODY GUARD လုပ်ငန်းကိုလည်း ပူးတွဲလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ V.I.P ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်များ၊ အရေးကြီးစာရွက်စာတန်းနှင့် အရေးကြီးပစ္စည်းများသယ်ယူလာသည့်လမ်းကြောင်းများ စသည့်ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားသော BODY GUARD များမှ စောင့်ရှောက်တာဝန်ယူပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ သက်တမ်းသည်ငါးနှစ်ကျော်ခဲ့သည့် အားလျှော်စွာ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ ပညာရပ်များအပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသော အဓိကလိုအပ်ချက်များ လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ရာတွင် တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရသော အခက်အခဲများအပေါ် ပိုမိုကျွမ်းဝင်နားလည်လာခဲ့သဖြင့် စည်းကမ်းပြည့်ဝပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ၀န်ထမ်းများမွေးထုတ်နှိုင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုခိုင်မာတောင်တင်းလာသော ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နှိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီသည် “မနက်ဖြန်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်လျော့ပါးစေဖို့ Apsect နှင့် ဆွေးနွေးစို့” ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားသည့်အားလျော်စွာ လူကြီးမင်းတို့ အနာဂါတ်တွင် သာယာချမ်းမြေ့သော လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ဘ၀တစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်စေရန်အတွက် အပြည့်အ၀တာဝန်ယူလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ဘ၀လုံခြုံမှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှုများသည် Aspect ၏ အောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်ကြောင်း နှလုံးသွင်း၍ အပြည့်အ၀ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် အသင့်စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Apsect ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှုများအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ါရင့်လုံခြုံရေး အသိပညာ အတတ်ပညာရှင်များမှ လာရောက်ဆွေးနွေးပေးမည့်အပြင် Ph-01-541758 သို့လည်း (၂၄)နာရီ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
၄င်းအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Admin Assistant ဒေါ်မေသူလှိုင် Ph-01-541758 သို့ဖြစ်စေ၊ Email – [email protected], [email protected] သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
“မနက်ဖြန်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်လျော့ပါးစေဖို့ Apsect နှင့် ဆွေးနွေးစို့”
No.39(A). Pho Sein Street ,
Bahan Township. Yangon.
01 541 758 , 01 540 291
(09) 540 6730, (09) 5109 884, (09) 73206432
2021 Copy Right © All Right Reserved.